Ukusetyenziswa kweNkqubo yoNxibelelwano kwiCisco Devices | YOQEQESHO
CISCO: Njengoko ububanzi beenethiwekhi zedatha kunye nedatha kugxininisa ukuphuhliswa, kunjalo kunjalo ubunzima kubanjineli abafuna ukuphumeza utshintsho. Unxulumano oluninzi lunamakhulu kunye nenani elikhulu lamashishini okunxibelelana. Ukujongana nayo yonke into, ngezinye iinkhathi, ayilunganga kwaye ithathe isithintelo esichaseneyo kunye nento enokuthi iyenze ngekhompyutha.
Kwabo bathabathe iphosi naluphi na I-Cisco yokunxibelelana igajethi kwixesha elidlulileyo ixesha elide, into enokuzibuza kukuba, "Ngaba i-summon line interface (CLI), ejongene negajethi enye nayiphi na imzuzu, indlela ebonakalayo ebonakalayo yokujongana nayo nayiphina inethiwekhi enkulu yokuphuhlisa?"
Kunzima ukuba nayiphi iinjineli ukunika iqhosha elithi "ewe" kulo mbuzo.
Eyona ndlela engcono yokujongana neendlela ezimbalwa zokusebenza kufuneka zibe nekhono lokurhoxisa utshintsho lwenethiwekhi. I-Cisco yenza kwaye ithatha ishishini elibhekiselele kwiNkqubo yoNxibelelwano lweComputer.
Iprogram yokuLawula iNethiwekhi yokuLungisa (SNMP) sele isetyenziswe ngokubanzi ekujongeni inethiwekhi ixesha elide. Ekuqaleni kwakucatshangelwa ekupheleni kwe-1980 kunye ne-SNMP ayizange ibe negalelo lenkqubo epheleleyo yomnatha.
Uphando, umzekelo, uye wavakalisa ukuba iya kuhanjiswa kunye ne-SNMP yokubeka iliso kwiimali zobuxhakaxhaka babo kulo nyaka.
Inkqubo yoNxibelelwano kwiCisco inokuphunyezwa kunye nezi khokelo zoshishino kunye nemibutho yamahhala:
I-Interface ehlaziyo: Ngengqiqo ecacileyo, ukuTshintshiselwa koMbuso (Reports State Transfer Transfer) (REST) ​​ngumgangatho weenkqubo zewebhu ezisisiseko zokuxhuma kunye nesayithi. I-Cisco ivule ii-interfaces eziphindaphindiweyo kwiintshintsho ezininzi kunye nokutshintsha, kwaye ngokubanzi kwi-Application Centric Infrastructure (ACI) yoNxibelelwano lweNethiwekhi.
Python: Le nkqubo yokuzikhethela iilwimi iye yahlakulela ngokukhawuleza kwiqela labantu beLinux ixesha elide. I-Cisco sele iququzelele ukuguqulelwa kwesicatshulwa se-python kwisikhokelo sokusebenza se-NX-OS, i-ACI kunye nezinye izigaba zeCisco.
Iimodeli zeDatha: Imodeli yedata yindlela eqhelekileyo yokubonisa indlela idatha echonga ngayo enye idatha kunye nendlela yonke idatha iphathwa ngayo kwaye ilahlwe. Inxalenye enkulu yamalungiselelo eninzi kunxibelelwano lwezixhobo zingathethwa kumboniso omkhulu wedatha. Imodeli yedatha ingasetyenziselwa ukuCwangciswa koNxibelelwano. I-Cisco isebenzise uMthombo woLwazi loLawulo (iMIT) njengendlela yokubonisa idatha ngaphakathi kwe-ACI. Olunye ulwazi olukhulayo lubonisa ukuba lunokuxhunywa kwi-Cisco ukutshintsha kunye nokutshintshwa yi-YANG show. I-YANG ibonakaliso lwedatha ukusuka kwibinzana elithi "Yona inye isizukulwana esilandelayo," eyimfuneko evulekileyo ejoliswe ekunqobeni ukungaphumeleli kwe-SNMP.
Amaxesha okwenza utshintsho kwizinto zobuchwephesha ngamnye ngamnye ekufikeni ekupheleni. Kukho iiprogram ezimbalwa zeprogram kwiinkalo ezininzi zeCisco ezifikeleleka kumatshini. Nangona kufuneke ukuba utyalo-mali oluthile lwenkqubo kuluhlu naluphi na uhlobo lwe-robhotization yenethiwekhi, emva kokuba luphelele, ixesha elimangalisayo kunye neendleko zokusebenza zingasindiswa.
Imiyalelo yesinyathelo ngesinyathelo ukufikelela kumadivayisi kwezinye iindawo kunye ne-IGP Route Redistribution